Waxyaabaha Macaamiilka ah ee GitHub: Websaydka hogaaminaya oo leh sifooyin badan
GitHub waa mid ka mid ah adeegyada ugu caansan xogta. Qalabkani wuxuu xoqin karaa tiro badan oo bogagga shabakadda ah oo ku qoran qaab la akhrin karo oo la isku xalin karo. Waxaa si fiican loo yaqaan tiknoolajiyada barashada mashiinka iyo waxay ku haboon tahay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Qaabka ugu kala duwan ee GitHub waxaa lagu falanqeynayaa hoos:
Guud ahaan GitHub, waxaad soo saari kartaa bogagga intarneedka ee aad rabto oo aad wax ka beddesho xogta qaab la isku bedeli karo sida CSV iyo JSON. Waxaad sidoo kale kormeeri kartaa tayada xogta marka la xoqayo; GitHub ayaa xirxiraya xiriirro aan faa'iido lahayn isla markaana si deg deg ah xogtaada u qaabaysan.
Khaladaadka la yareeyey
Si ka duwan sida kale ee dhaqameedyada keydinta xogta adeegyada, GitHub wuxuu xusuustaa xogtaada wuxuuna hagaajinayaa dhammaan qaladaad yar iyo weynba. Waxay na siisaa macluumaad sax ah oo aan khalad aheyn oo kormeeraya tayada xogta ayada oo keli ah. Waxaad sidoo kale xoqin kartaa faylasha PDF iyo dukumintiyada HTML oo leh qalabkan.
GitHub waxaa ugu fiican caan ku ah adeegsigeeda user-friendly iyo marwalba adeegga la isku halleyn karo. Uma baahnid wax dayactir ah waxaana loo isticmaali karaa bilo bilo kadib bilaha. Waxaad ka dooran kartaa noocyo kala duwan oo u sheeg GitHub xoqida iyo xogta dhoofinta qaab la jecelyahay. Waxay ku habboon tahay bilaabidda, ardayda, macalimiinta, iyo kuwa xor ah.
Diiwaanka macluumaadka laga helo bogagga internetka firfircoon
Iyada oo GitHub, waxaad xoqin kartaa macluumaadka laga helo bogagga shabakadaha sahlan iyo kuwa firfircoon. Qalabkani wuxuu sidoo kale xareeyaa xogta laga helo goobaha warbaahinta bulshada, dekadaha safarka iyo goobaha e-commerce iyada oo aan wax arrin ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay bedeshaa xuruufaha HTML-da ee hoosta ka xariiqaya dhammaan khaladaadka yar ee si toos ah. Awooda maaraynta ama abuuritaanka qoraallada iyo wakiillada
Mid ka mid ah sifooyinka ugu kala duwan ee GitHub waa in uu maamuli karo oo abuuri karo wakiillada iyo qoraallada labadaba. Qalabkani wuxuu wax ka qabtaa waxqabadyo waxtarrada badan si fudud oo loo xoqo ilaa toban kun oo bog oo internetka ah oo ku saabsan xaaladaha daqiiqadaha. Iyadoo GitHub, haya'daha wakiilada iyo macluumaadka isticmaalaha macluumaadka ee nidaamka waxaa la sameeyaa iyadoon arin.
Wuxuu u beddelaa xog aan ku habboonayn xogta habeysan ee loo adeegsan karo
. Io iyo Screction, GitHub wuxuu isku rogaa xogta aan haboonayn ee loo habeeyay, la adeegsan karo oo loo qaabeeyey xogo dhowr ilbiriqsi ah. Qalabkani wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay barnaamijka iyo kuwa aan barnaamijka ahayn. Maaha oo kaliya bogaga bogagga laakiin wuxuu sidoo kale muujiyaa boggaaga wuxuuna kaa caawinayaa inaad abuurto raadad badan oo internetka ah. Xogta waxaa loo dhoofin karaa XLS, XML, CSV iyo JSON qaababka, fududeynta shaqada ganacsatada iyo shirkadaha ilaa xad.
Agabyo caqli gal ah
GitHub wuxuu abuuri karaa wakiil daqiiqado gudahood mana u baahna barnaamij ama xirfad codsi. Iyadoo lagu saleynayo tiknoolajiyada barashada mashiinka, qalabkani wuxuu si toos ah u qorayaa natiijooyinka wuxuuna xoqayaa URL badan oo isku mar ah. Waxaa intaa dheer, waxay awood u leedahay in ay ka tagto goobta oo dhan wakhti ilbiriqsi waxayna si gaar ah ugu faa'iideysan kartaa warbaahinada sida CNN, BBC, New York Times iyo Washington Post.
Waxaa laga yaabaa in ay tahay waqtigii lagu qiimeyn lahaa farsamooyinkaaga qashinka xogtaada oo aad u isticmaasho GitHub si aad u kobciso ganacsigaaga Source .